Ukufika kukaGaba kuVonqo – Ntu News
November 13, 2020 November 13, 2020 Jaco Gangat-Duvenage	0 Comments	Dutywa
Ummango oonentethe wazi yintaka enamantshontsho. Abantu bakudala babesihla benyuka bekhangela amathafa anengca ukuze ikwazi ukutya imfuyo yabo. Kwenzeke njalo nakumfo wakwaGaba, uJonga.
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo uJonga walifulathela ilizwe lokuzalwa kuMcothama kwiingxondorha zakuCentane wajongisa umbombo kwilizwe lakuVonqo eDutywa. Xeshikweni esiya eDutywa wayephelekwe ngoonyana bakhe abathathu uToyise, uMelane kwakunye noFaniso. Bafika kwilali yakuVonqo bafikela kumzi kaMncoso umfo wakwaNgxabane. Xa efika uJonga kweli lizwe waqaphela ukuba umlambo nengca yinto ekhoyo kweli lizwe. Wathatha isigqibo sokuba makazimilisele iintente zakhe kuba imfuyo yakhe ibonakala iza kuhlutha.
Ngokutsho kwembali uJonga uye wafuna ukuba nobunganga kuMncoso de wafuna ukuba yinkosi yalo mhlaba afika kuwo. Imbali ithi uJonga waqaphela ukuba uMncoso yinkwenkwe waze wamxelela ukuba inkwenkwe ayinokwazi ukuphatha kumhlaba kaGcaleka. Wathi kuba semdala uJonga wabuthatha ubukhosi wabunika unyana wakhe uToyise.
Oonyana bakaJonga baye babelana umhlaba ukuze umntu ahlale nosapbo lwakhe ngoxolo. Azeka abafazi la madoda satsho sakhula isiduko samaNgqosini kwilali yakuVonqo.
Nangoku xa ufika kwilali yakuVonqo ufika kugcwele isiduko samaNgqosini. Nangona sebezinze kwilali yakuVonqo kodwa xa kukho imicimbi bayahambelana nooGaba abakuCentane ngoba bangabantu abanye.
Nangoku xa ufika kwilali yakuVonqo ufika kukho iifani ekuthiwa ngoToyise, uMelane kwakunye noFaniso.
← A positive from lockdown for young entrepreneur
International praise for EC top cop →
May 31, 2021 May 31, 2021 Jaco Gangat-Duvenage	0